Huawei Mate 20 X 5G pụtara na ntanetị na ọtụtụ nkọwa ya | Gam akporosis
Huawei Mate 20 X 5G pụtara na ntanetị yana ọtụtụ nkọwa ya
N'oge na-adịghị anya mgbe ha kwuchara Huawei Mate X, smartphone mbụ nke ika ahụ iji gosipụta ihuenyo foldable na njikọta 5G, Huawei kwupụtara ekwentị 5G ọzọ akpọrọ Huawei Nwunye 20 X 5G. Nke a bụ ụlọ ọrụ 5G nke na - enweghị ike ịpị apịa ga - enwe ọnụnọ n’ahịa.
N'oge na-adịbeghị anya China unicom gosipụtara ihe oyiyi nke Nwunye 20 X 5G na-egosi nke ahụ ọdịdị nke ọnụ ọgụgụ ahụ adịghị iche na ọdịdị nke ụdị nkịtị. Nanị ihe dị iche bụ akara 5G na azụ azụ.
Ọ bụ ezie na ụbọchị mmalite nke ekwentị ma ọ bụ ozi nke ọnụahịa ya amabeghị, isi ụdịdị ya e leaked online, nke na-ekpughe na smartphone nwere ike ịdị iche na ọkọlọtọ Mate 20 X.
Huawei Mate 20 X 5G na-enye
Dị ka leaked ọmụma, ekwentị ahụ ga-enwe nha ihuenyo dịka nke mbụ Mate 20 X, ma ọ ga-abịa na obere batrị ikike 4,200 mAh. Agbanyeghị, ọ na-atụ anya ịkwado teknụzụ nke 40W nke ngwa ngwa ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọtụtụ n'ime ndị ọzọ ụdịdị na-atụ anya ga-abụ otu ihe ahụ nlereanya nlereanya, gụnyere nnukwu 7.2-anụ ọhịa ihuenyo na Kirin 980 SoC con Balong 5000 chipset yana 8 GB nke Ram. Enweela okwu banyere otu ntọala Leica ugboro atọ na azụ.
Huawei Mate 20 X 5G mkpọsa igbe leaked
N'oge na-adịbeghị anya, e tinyekwara igbe azụmahịa nke Huawei Mate 20 X 5G na ntanetị site na Weibo. Nke a, n'otu aka ahụ, na-ekwu nkwado nke njikọta 5G. Banyere nnweta, anyị na-atụ anya na smartphone ga-adị n'oge na-adịghị anya mgbe mwepụta nke Huawei Mate X, nke ga-abụ na June nke afọ a. Ọnụahịa ya ka bụ ihe anyị ga-achọpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei Mate 20 X 5G pụtara na ntanetị yana ọtụtụ nkọwa ya
Amazon na Google na-eme udo: Amazon Prime vidiyo ga-adaba na Chromecast na gam akporo TV
Meizu 16S ga - egosiputa ihe mmetụta 48 MP na OIS na ndị ọzọ